WhatsApp dia mamela antsika hanafina ireo sary azontsika avy amin'ny galeri | Androidsis
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, sary, Tutorials, WhatsApp
WhatsApp dia mahazo vaovao marobe amin'ity herinandro ity. Andro vitsy lasa izay, nanomboka nahazo antso horonantsary vondrona ireo mpampiasa voalohany, ankehitriny, zava-baovao iray tonga amin'ilay fampiharana malaza. Amin'ity tranga ity dia misy ifandraisany amin'ireo sary azontsika amin'ny fampiharana. Satria ny sary rehetra azontsika dia voatahiry amin'ny telefaona, ao amin'ny galeria.
Ka raha miditra amin'ny galerian'ny finday avo lenta isika dia afaka mahita azy ireo eo. Saingy hiova izany. Satria manomboka izao Manome antsika ny fahafaha-manafina ireo sary sy horonantsary azontsika ao amin'ny galeriana ny WhatsApp. Zavatra mety ho tratra amin'ny fomba tsotra.
Tsy vaovao ity fizotrany ity, satria ny WhatsApp dia nanome antsika ny mety hatramin'ny ela. Fa nanatsotra fatratra an'ity dingana ity tamim-pahamendrehana izy ireo. Safidy iray no nampiana tao amin'ny fikirakira telefaona ahafahantsika mampihetsika na mamono io safidy io amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra.
Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mankany amin'ny fikirakirana ny fampiharana fandefasan-kafatra. Ao anatiny no tsy maintsy mandehana any amin'ny Data sy fitehirizana ary rehefa tonga any, amin'ny faran'ny zava-drehetra, dia ho hitantsika ny safidy vaovao. Safidy antsoina hoe Show media files in gallery. Voamarina amin'ny alàlan'ny default, ka mila esorintsika fotsiny io. Toy izao ny miafina ny sary ao amin'ny galeriana.
Rehefa tsy voamarinao io safidy io dia ho hitanao fa rehefa mankany amin'ny galeriana ianao, lTsy miseho intsony ireo sary sy horonan-tsary azontsika avy amin'ny WhatsApp. Amin'ny tranga sasany dia mety tsy hitranga eo noho eo izany ary mety maharitra roa minitra vao havaozina. Saingy mandeha ity endri-javatra ity.
Ity fampiasa vaovao ity dia tonga ao amin'ny WhatsApp beta vaovao, izay efa misy. Noho izany, ireo mpampiasa hafa dia tsy maintsy miandry ela kokoa mandra-pahaizan'izy ireo mampiasa io asa io. Na dia tsy tokony ho ela loatra aza raha tsy efa misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » sary » WhatsApp dia efa mamela anao hanafina ireo sary azonao ao amin'ny galeriana